Xakamaynta Tayada - Newsway Valve Co., Ltd.
Nidaamka Xakamaynta Tayada ee NSW
Farsamooyinka ay soo saarto Shirkadda Newsway Valve Company waxay si adag u raacaan nidaamka xakamaynta tayada ee ISO9001 si loo xakameeyo tayada baallayaasha inta lagu gudajiro geeddi-socodka oo dhan si loo hubiyo in alaabooyinka ay 100% u qalmaan. Waxaan badiyaa la xisaabtami doonaa alaab-qeybiyeyaashayada si loo hubiyo in tayada qalabka asalka ah ay u qalmaan.
Mid kasta oo ka mid ah wax soo saarkeenu wuxuu yeelan doonaa calaamadihiisa raad-u-gaar si loo xaqiijiyo raad-raadinta badeecada.
Samee Sawir si waafaqsan shuruudaha macaamiisha, iyo dib u eegista sawirrada farsamaynta.
Qaybta xakamaynta tayada:
Qeybta soo socota:
1.Baadhitaan indho indhayn ah oo ku saabsan castooyinka: Kadib markii ay riyaduhu soo gaaraan warshadda, muuqaal ahaan u fiiri qaabka loo shubay iyada oo la raacayo heerka MSS-SP-55 isla markaana samee diiwaanno si loo xaqiijiyo in jilayaasha aaney lahayn wax dhibaato ah oo xagga tayada ah ka hor inta aan la geyn kaydinta. Wixii tuubada waalka, waxaan u sameyn doonaa hubinta daaweynta kuleylka iyo baaritaanka xalka daaweynta si loo hubiyo waxqabadka alaabada.
Imtixaanka dhumucda Wall Valve: Kabka waxaa loo soo dhoofiyaa warshadda, QC waxay tijaabin doontaa dhumucda gidaarka jirka, waxaana lagu ridi karaa kaydinta ka dib marka loo qalmo.
3. Falanqaynta waxqabadka ceyriin: waxyaabaha imanaya waxaa lagu tijaabiyaa walxaha kiimikada iyo sifooyinka jirka, waana la sameeyaa diiwaanno, ka dibna waxaa lagu ridi karaa kaydinta ka dib markay u qalmaan.
4. Imtixaanka NDT (PT, RT, UT, MT, ikhtiyaar ahaan marka loo eego shuruudaha macaamiisha)
Qaybta wax soo saarka:
1. Baadhitaanka cabbirka Mashiinka: QC wuxuu hubiyaa oo diiwaan geliyaa cabirka la dhammeeyay iyadoo loo eegayo sawirrada wax soosaarka, wuxuuna u sii gudbi karaa tallaabada xigta ka dib marka la xaqiijiyo inay u qalanto.
2. Baadhitaanka waxqabadka alaabta: Ka dib marka badeecada la soo ururiyo, QC waxay tijaabin doontaa oo duubi doontaa wax soo saarka wax soo saarka, ka dibna u gudub tallaabada xigta ka dib marka la xaqiijiyo inay u qalanto.
3. Baadhitaanka cabbirka miisaanka: QC wuxuu baari doonaa cabbirka waalka iyadoo la raacayo sawirrada qandaraaska, wuxuuna u gudbayaa tallaabada xigta ka dib markaad ka gudubto imtixaanka.
4. Imtixaanka waxqabadka xirashada Valve: QC wuxuu sameeyaa baaritaanka hidaalka iyo tijaabada cadaadiska hawada oo ku saabsan xoogga waalka, shaabadda kursiga, iyo shaabadda sare sida waafaqsan heerarka API598.
Baadhista Rinjiga: Ka dib markay QC xaqiijiso in dhammaan macluumaadka ay u qalmaan, rinjiga waa la samayn karaa, rinjiga dhammaystiranna waa la baari karaa.
Baadhitaanka Baakadaha: Hubso in badeecada si adag loogu dhejiyay sanduuqa alwaaxda dhoofinta (sanduuqa alwaaxda plywood, sanduuqa alwaaxa fumigated), oo qaado talaabooyin looga hortagayo qoyaanka iyo kala firdhinta.
Tayada iyo macaamiisha ayaa ah aasaaska badbaadada shirkadda. Shirkadda Newsway Valve Company waxay sii wadi doontaa cusbooneysiinta iyo hagaajinta tayada waxsoosaarkeena lana jaanqaadi doonta adduunka.